Sri Lanka Soso-kevitra alohan'ny mitsidika. ~ Journey-Assist - zava-dehibe sy mahasoa!
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Torohevitra alohan'ny hitsidihana azy
Soso-kevitra alohan'ny hitsidihan'i Sri Lanka
13 Desambra, 2019
4 ny fanehoan-kevitra
Ny fisotroana ny kalitaon'ny rano
Biby bibidia any Sri Lanka
Bibikely. ny moka
Akanjo ho an'ny fitsidihana tempoly sy toerana masina any Sri Lanka. fitandremam-pahasalamana
Ahoana ny fomba fitafy ao Sri Lanka
Ny fitsipiky ny fitondran-tena any Sri Lanka. Rehefa tsy afaka maka sary ianao
Miantsena. Taratasy fanamarinana sy taratasim-bola
Trade. Fisaraham-panambadiana ao Sri Lanka
Fako any Sri Lanka. Fitsipika momba ny fanafarana sy ny fanondranana
Import sy fanondranana vola
Ny zava-misy eny an-dalana. Zava-dehibe!
Ny sakafo malezin'i Sri Lankan dia maranitra, indraindray tsy dia mahazatra amin'ny vahiny.
Alohan'ny hanandrana lovia tsy mahazatra dia tokony, raha azo atao dia manontany ny mpitari-dalana na ny mpandroso sakafo momba izany, hamaritana hoe inona no ampahany amin'ilay sakafo, na andramo aloha ampahany kely fotsiny.
Ny saosy dia mila ny mahaliana indrindra. Ny zava-manitra eo an-toerana dia mety ho maranitra tanteraka.
Ny lovia maranitra dia natokana hohanina amin'ny mofomamy (matetika izy vao mafana) fa tsy misotro rano.
Ny kalitaon'ny rano fisotro any Sri Lanka
Tsy tokony hampiasa rano amin'ny paompy any Sri Lanka ianao, ary aza mampiasa ranomandry izay amidy eny an-dalambe, satria azo atao fa avy amin'ny rano mitovy ihany.
Mineraly mineraly na rano madio tsotra ao anaty tavoahangy plastika nohafohezin'ireo vatan'ny orinasa dia mety ampiasaina.
Tokony hisasa tsy tapaka foana ny tananao mampiasa savony.
Ianao koa mila manasa tsara ny voankazo sy legioma. Tsy azo ekena ny fihinanana voankazo izay notapatapahan'ny mpivarotra tamin'ny antsy lava-lona.
Ny fampiasana ny salady an-tsaha sy tsy ilaina dia ampiasaina.
Loza manan-danja lehibe dia ny gidro. Ireo biby ireo dia hita any Sri Lanka na aiza na aiza misy olona maro be ary mifono avonavona be.
Matetika izy ireo dia mandray sakafo sy zavatra maro amin'ny tanan'ny olona, ​​ao anatin'izany ny fakan-tsary, telefaona. Tsy azo atao ny mamerina ny voafidy aorian'izany. Ankoatr'izany, ny primati dia tsy azo ihodivirana amin'ny faritry ny monasitera, ka ny fikatsahana ny rajako izay nandroba zavatra iray dia mety hiteraka korontana amin'ny vahoaka eo an-toerana.
Ny gidro bebe kokoa indraindray dia miditra ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ary manamboatra pogrom ao aminy. Ka alohan'ny handaozanao dia mila mihidy akaiky ny varavarankely ianao!
Ny alika marobe manelingelina dia manao fandrahonana, ambonin'izany rehetra izany, ivelan'ny tanàna lehibe.
Eny an-dàlana dia mila miambina ihany ianao, tahaka ny bibidia avy any an-ala, toy ny androngo, ny vorombola, ny serfa, ny gidro, ary afaka mihaona elefanta mihitsy aza ianao!
Hajao ny biby. Aza adino fa tsy valan-javaboary io ary tsy misy fefy sy fifandonana eo aminareo roa tonta.
Bibikely, moka any Sri Lanka
Ny faritra afovoan-nosy dia miteraka moka, ka mahomby tokoa ny mandroaka!
Mampidi-doza koa ny wasps. Voalohany indrindra izany dia mifandraika rehefa mitsidika tsangambato ara-tantara izay ao anaty ala. Matetika ny mpanamory miondrika mamorona rindry eo amin'ny rindrin'ny tranobe fahiny, ary raha mandre tabataba izy ireo dia afaka manafika olona.
Noho izany antony izany, dia mila mitandrina kely ianao rehefa mitsidika Aluvihara, Sigiriya, Mihintale ary tranokala hafa taloha.
Nanomboka ny volana Mey ka hatramin'ny septambra, tany andrefana sy atsimon'i Sri Lanka, ny rivotra Monsun dia nifofofofo tamin'ny morontsiraka, satria io no atahoran'ny ranomasina. Indraindray aza ny onja manarona lalana eny amoron-tsiraka.
Noho izany antony izany, ny milomano any an-dranomasina, mila misafidy toerana mangina ianao ary mila mitandrina, satria mampidi-doza ny atiny ambanin-javatra.
Ankoatra izany, ny haran-dranomasina maranitra dia mety handratra ny tongotrao.
Ary nanomboka ny janoary ka hatramin’ny aprily, dia milamina sy mazava ny rano ao an-dranomasina any atsimo sy atsimon’ny Nosy. Ary amin'ny volana sisa dia tsara ny rano any avaratra sy atsinanan'i Sri Lanka
Akanjo ho an'ny fitsidihana tempoly any Sri Lanka. Fahadiovana ny tempoly
Tsy ekena ny hiditra ny fipetraky ny tempoly sy ny faritry ny tempoly fohy (ambonin ny lohalika) na fehin-kibo. Ny akanjo dia tokony manafina ny soroka, lamosina ary ny tongotra ambonin'ny lohalika.
Ny fidirana amin'ny tempoly dia mila esorina ny kiraronao ary satroka.
Sri Lankans, fomban-drazana tsy dia madiodio, ary amin'ny toerana toa izany dia asaina hampiasa kiraro azo ampiasaina na mitsitsy, na manala ny tongony aorian'ny fitsidihana!
Mandritra ny taona dia mora indrindra amin'ny akanjo kely, maivana vita amin'ny lamba voajanahary.
Ny satroka malalaka sy solomaso maizina dia mandeha tsara mandritra ny hafanana.
Ny menaka manokana dia mamonjy amin'ny hafanana.
Ny kiraro tiana no kiraro, kapa sy kapaoty tsara.
Ho an'ny fitsangatsanganana an-tendrombohitra dia mendrika ny akanjo mafana, kiraro azo sy tselatra. Zava-dehibe koa ny fananana ranomandry vita amin'ny rano, capes ary elo, satria avy ny orana matetika.
Manakaiky ny morontsiraka dia tsy dia tsikaritra firy ny hamandoana rivotra fa any amin'ny faritra anatiny kosa tena mandreraka be.
Ny fitsipiky ny fitondran-tena any Sri Lanka. sary
Tsy tokony haka sary ny mponina sy ny tempoly ianao, raha tsy efa nahazoana alalana.
Ny tsy manam-paharoa dia raisina rehefa mijoro eo akaikin'ny sarivongan'i Buddha ny olona iray, mamadika azy.
Ny fihetsika tsy mendrika dia misy ny fampisehoana amin'ny olona ny tongotr'izy ireo na ny tongony tsy mitondra tongotra, manondro olona na zavatra misy ny rantsantanana fanondro, ary maka zavatra (na manendry olona iray) amin'ny tanany havia. Ny tanana havia dia raisina ho "tsy madio", na dia sasana tsara.
Tsara homarihina fa masina ny biby (omby voalohany) eto amin'ity firenena ity, noho izany dia tsy tokony ho diso lalana izy ireo na amin'inona na amin'inona.
Tsy tokony haka sary an-tsaina ireo zavatra entin'ny miaramila na manana lanjany ara-pahefana ianao. Noho ny toe-java-misy politika sarotra eo amin'ny firenena, ny fihetsika mampiahiahy ataon'ny vahiny dia mety hiteraka fanehoan-kevitra tsy ampy.
Anisany manokana, tsy afaka miala amina toerana ho an'ny besinimaro ny fanananao na dia vetivety monja aza, satria mety efa ahiahiana ho mpampihorohoro ianao nandao ny fipoahana.
Tsy azo atao ny maka sary ny zavamaniry herinaratra, seranam-piaramanidina, tetezana, seranan-tsambo, vondron-tafika, tobin-dalamby.
Imbetsaka, ny mpizahatany izay naka sary toy izany no nohazonina, nalaina am-bavany, ary nosavain'ny polisy Sri Lankan sy tompon'antoka fiarovana.
Fampahalalana rehefa miantsena. Taratasy fanamarinana sy taratasim-bola
Ny firavaka dia tokony hividy irery amin'ny fivarotana firavaka manokana. Mandritra izany fotoana izany, mila mitaky ianao hamoaka fanamarinana sy taratasy fanamarinana manome ny zon'ny mpanondrana zavatra iray any amin'ny firenena.
Eto, ny vatosoa sarobidy indrindra dia amidy amin'ny vidiny mora.
Ho fanampin'izy ireo dia azo antoka ny fividianana dite, zava-manitra, ary koa ny vokatra haingon-trano vita amin'ny asa tanana, toy ny saron-tava sy batik.
Na dia any amin'ny tanànan'ny Sri Lanka, tena lafo ny fitafiana mora vidy.
Varotra sy "fisaraham-panambadiana"", fisolokiana tao Sri Lanka
Any amin'ny basy sy amin'ny fivarotana kely dia azonao atao ny manao ny tsy fifanarahana.
Tokony ho tsaroana fa matetika ny mpitari-dàlana, ny tuk-tukers ary ny olom-pantatra avy amin'ny mponina eo an-toerana dia mirona mitondra ireo mpizahatany any amin'ny toeram-pivarotana toy izay ny vidiny mihoa-pampana.
Na izany na tsy izany dia tsy tokony mihaino ny soso-kevitry ny eo an-toerana ianao, manolotra zavatra hividianana zavatra tsara amin'ny toerana hafa.
Alohan'ny handeha amin'ny fiantsenana dia tsara kokoa ny mitady hoe aiza ianao no tokony hividy amin'ny Internet. Eny, na vao nividy izay toerana novidian'ny olona teo an-toerana ihany.
Fitsipika momba ny fadin-tseranana ho an'ny fanondranana any Sri Lanka
Avy any Sri Lanka, ny dite dia azo aondrana amn'ny 2 kg isaky ny olona.
Mba hahazoana habe betsaka kokoa dia ilaina ny famoahana fahazoan-dàlana ho an'io.
Na izany aza, raha ampiharina, tsy mifehy izany lalàna izany - amin'ny fanao dia tsy misy olona mandinika ny lanjan'ny dite sy ny fisian'ny fahazoan-dàlana toy izany.
Mba hahafahana maka ny antika (zavatra antitra izay mihoatra ny 50 taona), indrindra ny sarontava taloha, sora-tanana, vola madinika, sns, dia mila fahazoan-dàlana manokana ihany koa, izay navoakan'ny National Archive of Sri Lanka.
Ankoatr'izay, takiana manokana amin'ny fanondranana ivory, zavamaniry teratany, biby ary corals, ary vatosoa tsy mbola voasazy.
Manondrana sy manafatra vola any Sri Lanka
Ny vola dia azo aondrana amin'ny vola tsy mihoatra ny 5 dolara amerikana amin'ny olona iray.
Vola lehibe kokoa no tokony nambara ho fanondranana.
Mandritra izany fotoana izany, ny vola any India sy Pakistan amin'ny habetsahana dia voarara amin'ny fanafarana sy ny fanondranana any Sri Lanka.
Raha ny rupees Sri Lankan kosa dia avela alefa haondrana ao anaty vola hatramin'ny 5 isaky ny olona iray izy ireo, saingy tsy voamarina amin'ny fampiharana izany.
Mba hifandraisana mora kokoa amin'ny firenenao raha any Sri Lanka ianao dia tokony hividy karatra SIM -n'ny mpandraharaha iray eo an-toerana.
Mandefa vola be kokoa ny fikorontanana Roaming.
Ny mpandraharaha Sri Lankan sasany dia afaka miantso an'i Rosia sy ny firenena eoropeana sasany amin'ny tahan'ny 0,2 isanjato.
Ny Internet, amin'ny ankamaroan'ny tranga, dia mora kokoa koa amin'ny fampiasana finday. Any amin'ny faritra fizahan-tany dia azo leferina tokoa ary tsy ambany, na tsy mihoatra ny Internet, izay mizara maimaimpoana any amin'ny hotely.
(Antsipiriany momba ny serasera finday sy Internet ao Sri Lanka HERE)
Ny zava-misy eny an-dalana. LEHIBE!
Mampalahelo fa tsy hita tahaka ny olona ny mpamily fiara mpitondra moto eny an-toerana amin'ny ankapobeny.
Nandehandeha tamin'ny fitsipika i Sri Lankans hoe "izay manana famantarana lehibe dia marina." Ireo fiara fitateram-bahoaka no mafy indrindra, izay somary ambany noho ny kamiao, ary aorian'izany dia misy fiara mpandeha.
Tokony ho voaomana ho amin'ny fandehanana fa ny mpamily hafa kosa hivoaka hitsena anao, ny familiana tsy hivoaka amin'ny alàlan'ny mari-pamantarana ary mihodina ny lohany. Rehefa tratra, tsy misy mijery moto akory.
Niverina tamin'ny làlany tany am-boalohany, nisy mpamily iray tafahoatra nanosika moto amin'ny sisin'ny làlana.
Amin'ny toe-javatra rehetra ireo, tsy misy dikany sy mampidi-doza ny manandrana loham-pianakaviana. Mila miverina eny amoron-dàlana ianao, manome lalana ireo fiara izay manelingelina anao.
Fa dia vao manomboka aloha ny zava-drehetra!
Raha ny marina, ny rafitra sy ny lojika. Ary tsy miankina amin'ny haavon'ny fanombananao. Ary raha azony tsara, azo antoka sy milamina tsara ny hetsika any Sri Lanka.
Nianiana tany noho ny antony. Izay angatahana famantarana.
Amin'ny tranga inona izy ireo no manao famantarana:
Na misy misy manafika. Ohatra, ny fanatratrarana. Famantarana fohy no vokarina, ilazana fotsiny fa eto ianao ary izay tianao ho voamarika. Famantarana fohy ary handeha sahy hahatratra.
Famantarana lava - dia ho any amin'ilay mametraka anao amin'ny toerana sarotra. Ohatra, ny fisosorana tsy amin'ny tanjona avy amin'ny lalana, manindry eo amin'ny sisin'ny arabe.
Alohan'ny fihodinana (indrindra fa afovoan-tanàna, izay misy bibilava malaza), henoy. Tena ilaina ny mari-pamantarana eto, ary mampitandrina izy ireo fa misy olona mitondra fiara.
Na amin'ny lalana tsy misy na aiza na aiza misy ny fijery toy izany miaraka amin'ny fahitana mahantra na tsy eo, dia tsy maintsy mitomany ny mpampiasa lalana alohan'ny fotoana hahatongavana.
Interesting! ary tokony ho tiana:
NOBODY dia liana amin'ny voina. Sri Lanka dia firenena tsara olona tsy maniry ary tsy manao ratsy amin'ny tanjona tanjona!
Tokony ho takatra fa ny bisikileta no fiara azo fehezina indrindra eny an-dalana. Ary izany no antony, indraindray toa tsy miraharaha eny an-dalana izy ireo. Raha ny marina, ireo mpampiasa lalana hafa dia resy lahatra fa amin'ny bisikileta iray no ahafahanao miatrika ny toe-javatra rehetra. Ianao, raha mitsambikina manerana ny zaridaina dia hevero tsy ho very maina ny fody eny amoron-dalana. Resy lahatra ianao fa hiatrika tsara ny zava-misy fa mandrisika azy ireo ianao. Miaraka amin'ny bisikileta, mitovitovy.
Fomba iray mahaliana. Ireo fiara ao Sri Lanka, toa saika ny any Azia Atsimo Atsinanana, dia tsy tisy (maizina) ny tondrozotra sy ny varavarankely aoriana. Izany dia natao mba hahitan'ny mpandeha bisikileta ao aoriana ny alalan ' Làlana iray ny fiara, izay midika izany fa afaka manombatombana bebe kokoa ny zava-misy ny fifamoivoizana ary mamolavola ny fihetsik'izy ireo eny an-dalana.
Fitaratra fanampiny sy famantarana tokana
Ary koa, saika ny fiara rehetra dia ahitana fitaratra fanampiny eo amin'ny sehatry ny lamba. Ireo fitaratra ireo dia napetraka manokana hanampiana ny famerenana famerenana fanampiny momba ny "zona maty", izay matetika dia mahazo bisikileta kely.
Ny famantarana ny fiara any Sri Lanka koa dia miavaka amin'ny feo. Izany hoe, samy manana ny mari-pahaizana manokana ny karazana fiara tsirairay. Amin'ny alàlan'ny famantarana iray, azonao avy hatrany ny aotobisy, fiara fitaterana, SUV, kamiao na bisikileta no manome an'io famantarana io. Manampy ihany koa izy io hahatakatra ny toe-javatra eny an-dalana.
Izany rehetra izany dia miteraka fiarovana amin'ny làlana any Sri Lanka. Na dia eo aza ny fahatsapana voalohany dia tsy fahita firy ny lozam-pifamoivoizana eto.
(Azo jerena eto eto ny antsipirihany momba ny fihetsehana ny hetsika any Sri Lanka)
Ny ora ao amin'ny Sri Lanka (UTC + 5: 30)
fa izay ihany koa! nitsidika an'i Sri Lanka. torohevitra angamba no mahasoa indrindra voalaza eto. lahatsoratra ilaina. amin'ny mpanoratra - offset!
Reply to Polli
Misaotra anao tamin'ny valin-teninao, Polli!
Ny fampahalalana aseho eto dia azo avy amin'ny zavatra niainantsika nitsangatsangana tany Sri Lanka, ary fampahalalana voamarina avy amin'ny Internet.
Ny farany vato dia nahaliana indrindra.
Tao Thailand, Vietnam, dia tsaroako io korontana teny an-dàlana io.
Manoratra zavatra mitovy momba an'i Lanka ry zareo, saingy hafa ny lazainao.
Ho any aho tsy ho ela, hijery aho, ka raisin'izy ireo ny fanazavana voaray avy aminao.
Misaotra amin'ny valiny!
Ny farany farany dia miorina amin'ny fototry ny fanandramana manokana sy ny fandinihana azy.
Ho mahaliana ny fahazoana ny hevitrao rehefa miverina.
Mirary soa ao Sri Lanka). Hangatsiaka io toerana io!
Salanisan'ny salanisa 4.3 / 5. Isan'ny isa: 4